Ukuhamba Kwemeyili: Ngeza Abaphenduli Abazenzekelayo bese Ushintsha Ukulandelana Kwe-imeyili | Martech Zone
Ukuhamba Kwemeyili: Ngeza Abaphenduli Abazenzekelayo bese Ushintsha Ukulandelana Kwe-imeyili
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 4, i-2015 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 4, i-2015 Douglas Karr
Enye yezinkampani yayineplatifomu lapho ukugcinwa kwamakhasimende kwakuhlanganiswe ngqo ekusebenziseni kwabo ipulatifomu. Kalula nje, amaklayenti ayisebenzisile abe nempumelelo enkulu. Amaklayenti adonsa kanzima ashiya. Lokho akuvamile nganoma yimuphi umkhiqizo noma insizakalo.
Ngenxa yalokho, sithuthukise uchungechunge lwama-imeyili lokugibela afundisa futhi ahlupha ikhasimende ukuthi liqale ukusebenzisa ipulatifomu. Sibanikeze amavidiyo wokuthi kwenziwa kanjani futhi nemibono eminingi yokuthi ungayisebenzisa kanjani. Ngokushesha sabona ukwanda kokusetshenziswa, okwaholela emiphumeleni, okwagcina kugcine ukugcinwa kwamakhasimende okungcono. Senze ukuthi lolu chungechunge lusebenze njengomphenduli we-auto ngokushesha lapho ipulatifomu leklayenti selilungile futhi sebeqedile ukuqeqeshwa.
Ngenxa yokuthi ama-imeyili ayezenzakalelayo, bekukho izindleko ezincane zokuthuthukisa uhlelo. Kodwa-ke, ngaphandle kokuthi sifuna ukuchitha imali eningi ngesikhathi sokuthuthuka, ukuhlanganiswa nokuzisebenzisela okwenze ukugeleza kwama-imeyili kwakufanele kwenziwe kusetshenziswa ipulatifomu enkulu.
Ukuhamba kweposi yipulatifomu eyakhelwe ngqo umsebenzisi wokugcina wokuhudula bese ephonsa ukulandelana kwe-imeyili ekuhambeni komsebenzi.
Izici Zokuhamba Kwemeyili Faka
Ukuzenzekelayo - Yakha ukulandelana okufana nokugeleza ngokuchofoza okumbalwa. Imephu yonke imikhankaso ngokubukeka.
Ukuqondisa - Misa ukucabanga ngamasegmenti bese uqala ukucabanga ngabantu ukuze imilayezo yakho ibe ngeyakho uqobo.
uhlelo lwezikhathi - Thumela imikhankaso yakho lapho abamukeli bephendula kakhulu, ngaphezu kwesikhathi sosuku futhi kususelwa ekuziphatheni kwangempela.
WordPress - Xhuma isiza sakho se-WordPress ngemizuzwana ukudala amafomu wangokwezifiso kanye nabasebenzisi bamathegi ngokususelwa kuzenzo ezenziwa kusayithi.
Ama-Analytics - Ungalindi kuze kuphele - bona empeleni ukuthi yini esebenzayo njengoba kwenzeka bese ulungisa imikhankaso yakho endizeni.
Ukuhlanganiswa - Okugcwele API nokusekelwa kokwakhiwa kokuhlanganiswa kwenkambiso. Ngaphezu kokuhlanganiswa okungaphezu kwama-400 okungenzeka kube khona ngeZapier.
Amaphrofayili womthumeli - Phatha amaklayenti amaningi, imikhankaso nabathumeli konke kusuka ku-akhawunti eyodwa nokushintshanisa okushisayo ngaphakathi kwemikhankaso.
Ukumaka - Funda kabanzi ngabantu ngaphakathi kwezithameli zakho ngokususelwa kuzenzo abazenzayo kumikhankaso naku-inthanethi.
Izoni zesikhathi - Setha amazoni wesikhathi ezingeni lasendaweni, ukuze ukwazi ukuthumela umkhankaso ngamunye ngesikhathi esifanele sosuku.
I-API ephelele - Ukuhamba kweposi kwakhiwe kusuka kufayela le- API phezulu. Yonke insizakalo iyaphela API nelenu lingakwenza.
Tags: imikhankaso yokudonsaama-imeyili analyticsi-imeyili apii-imeyili ezenzakalelayoi-imeyili ye-wordpressukuhlanganiswa kwe-imeyiliukubika nge-imeyiliukulandelana kwe-imeyiliukukhomba i-imeyiliisikhathi se-imeyiliukuhamba kwe-imeyiliukugeleza kweposiukuzenzekelayo kokuzenzekelayoamaphrofayili womthumeliizindawo zesikhathiWordPressi-imeyili ye-wordpresszapier
TelePrompter: I-Online Professional Teleprompter yakho